बालबालिकालाई दुव्र्यसनबाट बचाउन के गर्ने ? - Ratopati
बच्चा जन्माउनु, हुर्क्काउनु, शिक्षादिक्षा दिलाउनु मात्र आफ्नो अभिभारा होइन । कतै तपाईंको अधिक लाड प्यारले वा तपाईंको हेल्चेक्र्यााइँले आफ्नो बच्चा मात्र होइन समाजको अरु बच्चा बिगार्ने बाबु आमा त तपाईं बन्नु भएको छैन ? विचार गर्नुस्, यदि त्यसो हो भने बिग्रिएका बाल बच्चाको दोष तपाईंलाई लाग्न सक्छ । तपाईंले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपराध गर्नुभएको हुन सक्छ । तपाईंको लापरवाहीले तपाईंका आफ्नो बच्चा त बिग्रिन्छ नै उसले अरु धेरै साथी बिगारेको हुन सक्छ ।
कुलतमा फसेकामध्ये हुनेखाने अर्थात् सभ्रान्त कहलिएका घरपरिवारका छोराछोरीको बाहुल्यता हुन्छ । बिग्रिन सक्ने उमेरमा आवश्यक निगरानी नहुनु, आवश्यकताभन्दा बढी लाडप्यार, चाहिनेभन्दा बढी फजुल खर्च दिने आदि कुराले पनि छोराछोरी थाहै नपाई लागू औषध दुव्र्यसनमा फसेका हुन सक्छन् । छोराछोरी बिग्रिनुमा धेरथोर बाबुआमाको पनि भूमिका हुन्छ । बाल बच्चालाई आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्र छोडिनु पनि हुँदैन । के खान्छ ? कहाँ जान्छ ? कस्ता व्यक्तिको सङ्गतमा छ ? आदि इत्यादिको पर्वाह नगर्नु, बाबु आमाको भूल हो । मायाममताको नाममा अधिक माया पाएर या बाबुआमाबाट पाउने मायाको अभावमा बालबच्चा दुव्यसनीमा फसेका हुन्छन् । अभिभावकले आफ्ना बालबच्चालाई स्वास्थ्य, शिक्षादीक्षा मात्र होइन संस्कार पनि दिन सक्नुपर्दछ । जीवनमा संस्कार अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ र उचित संकारले नै भावी गोरेटोको मार्गनिर्देश गर्छ ।
आफ्ना बच्चाहरुमा देखिएका फरक प्रकारका गतिविधिको ख्याल राख्नु पर्दछ आफ्ना छोराछोरीको निगरानी अरुले होइन तपाईंले नै राख्ने हो । छोराछोरी अबेरसम्म नसुत्ने र बिहान अबेरसम्म नउठ्ने, पढाइमा गयल हुने वा असफल हुने, दिन प्रतिदिन झुठो बोल्दै जाने, एक्लै बस्न रुचाउने वा अलि फरक प्रकारका व्यक्ति साथी बनाउने, परिवारसँग घुलमिल नगर्ने, तौल घट्ने, दुब्लाउँदै जाने, पैसाको माग बढी गर्ने, ठूलो स्वरले बोल्ने उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आउने, जिम्मेवारीबाट टाढा रहन खोज्ने, समयमा घरमा नआउने, सरसफाइमा ध्यान नदिने जस्ता क्रियाकलाप देखिएमा दुव्र्यसनमा लागेको शङ्का गर्न सकिन्छ । हाम्रो सानो लापरवाहीले पछि ठूलो समस्यामा पर्न सकिन्छ । बेलैमा सचेत बनौँ । लागू औषध दुव्र्यसन यसरी मौलाउँदै जानुमा कतै तपाईं हामी नै त दोषी छैनौँ ? बेलैमा विचार गरौँ ।
नेपालमा धेरै युवाहरु बेरोजगार, अशान्ति, द्वन्द्वले गर्दा लागू पदार्थको कूलतमा फसिरहेका छन् । कति युवा साथीसँगीको लहैलहैमा लागेर पनि लागूऔषध प्रगोग गर्न पुग्छन् । लागूऔषध नियन्त्रण गर्न बनेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई संवेदनशील भई कडाइका साथ लागू गर्न नसके दुव्र्यसनीले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने तर्फ समयमा नै सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । राज्यपक्षको ध्यान यतातिर नपुगेको जस्तो देखिन्छ । नेपालजस्ता विकासशील देशहरुमा लागू औषधको ट्रान्जिट बनेको पाइन्छ । नेपालको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा अहिले ३ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू लागू ओषधको कुलतमा फसेका छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत ६ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढ्ने बालबालिका रहेका छन् । यसमा युवतीहरूको सङ्ख्या ४५ हजार रहेको छ । गाउँ भन्दा सहरमा प्रतिदिन बढ्दै गएको लागूऔषध दुव्यसनले हजारौं युवाले मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । लागू औषधको प्रयोगले प्राणघातक रोग लाग्न गई उपचार खर्चमा अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
लागूऔषध दुव्र्यसन भोलिको राष्ट्रिय चुनौती हुन सक्छ । राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । लागूऔषध न्यूनीकरणमा राज्यपक्ष मात्र होइन व्यक्ति, परिवार र समुदायबीचको समन्वय अनिवार्य हुनु पर्छ । अनि मात्र यसको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सुर्ती, चुरोट, पराग, गुड्खाबाट सुरु भएको आदत गाँजा, चरेस, हिरोइन, अफिम, कोकिन, ब्राउन सुगर, नसाका रूपमा प्रयोग हुने विभिन्न इन्जेक्सनसम्म लगाउने हुनपुग्छ । यस्तै जाँडरक्सी जस्ता अम्मलको बिक्री दिनानु दिन बढ्दो छ । विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएको लागूपदार्थको प्रयोगकर्ताको अनुपात बढ्नुले भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको भविष्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यसर्थ हाम्रो सानोतिनो लापरवाहीले पछि ठूलो सङ्कटमा पर्नसक्छौँ । हरेक बाबुआमाले बालबालिकाको व्यवहारको निगरानी गरी राम्रो पारिवारिक संस्कार दिन सक्नुपर्छ ।